एकै कहानीमा आधारित छन् यी बलिउड फिल्म – Medianp
एकै कहानीमा आधारित छन् यी बलिउड फिल्म
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, मङि्सर १९, २०७४०२:४५
काठमाडौं, १९ मंसिर । बलिउड फिल्म इन्डस्ट्रीमा एकै टपिक माथि धेरै फिल्म बनेका छन् । ती फिल्ममा कुनै हिट छन् त कुनै फ्लप । कहिले कहिले त एक टपिकमा बनेका दुवै फिल्म फ्लप समेत भएका छन् । एकै विषयलाई दर्शकले पटक–पटक हेर्न नचहाने भएकाले फिल्म असफल भएका उदाहरण छन्
हेर्नुहोस् एकै टपिकमा बनेका फिल्मका सूची
१. लखनउ सेन्ट्रल र कैदी ब्याण्ड
केही समय अघि फरहान अख्तरको ‘लखनउ सेन्ट्रल’ र अदर जैन आन्या शर्माको ‘कैदी ब्याण्ड’ रिलिज भएका थिए । यी दुवै फिल्म केही समयको अन्तरालमा रिलिज भएका हुन् । यी दुवै फिल्मको कहानी लगभग एकै छ । फिल्मको मुख्य कथा जेलमा कैदी हुन्छन र जेलको नाइके आफ्नो समुह बनाए भाग्ने योजना बनाउँछ । एकै काहानी भएका यी दुवै फिल्म असफल भएका थिए ।
२. भगत सिंह
२००२ मा शहिद भगत सिंहको जिवनमा आधारित ३ फिल्म रिलिज भए । फिल्म ‘शहिद–ए आजम’मा अभिनेता सोनू सूद भगत सिंहको भूमिका थिए । त्यसपछि फिल्म ‘शहिद’ बबी देओल मुख्य भूमिकामा थिए । त्यसपछि अजय देवगन ‘द लिजेन्ढ अफ भगत सिंह’मा भगत सिंहको भूमिकामा देखिए । यी तीन फिल्म एकै बर्ष रिलिज भएका थिए । तर कमाईको मामलामा तीनै फिल्म असफल भए । यो भन्दा पहिले शम्मी कपूर र मनोज कुमार पनि ठूलो पर्दामा भगत सिंहको भूमिकामा देखिइसकेका छन् ।
३. सुल्तान र दंगल
सलमान खानको फिल्म ‘सुल्तान’ र अमिर खानको फिल्म ‘दंगल’ उस्तै कथामा आधारित छन् । दुवै फिल्ममा मुख्य पात्रले पहलवानी गरेको देखाइएको छ । यी दुवै फिल्ममा हरियाणाको भाषा प्रयोग गरिएको छ । दुवै फिल्म ब्लकबस्टर बनेका थिए ।
४. पैडम्यान र फुलु
अक्षयकुमारको ‘पैडमैन’ अगामी बर्ष रिलिज हुनेछ । फिल्म ‘फुलू’ पहिले नै रिलिज भइसकेको छ । दुवै फिल्म महिलाको महिनावरीका बेला गर्नुपर्ने सरसफाइ र सेनिटरी प्याडमा आधारित छन् ।
५. बादशाहो र इन्दु सरकार
यही बर्ष रिलिज भएको फिल्म ‘बादशाहो’ र ‘इन्दु सरकार’ पनि एकै खालको कथामा आधारित छन् ।
६. सारागढीको युद्ध
अक्षयकुमारले ट्वीट गरेर बताएका छन्, की उनी फिल्मेकर करण जोहरसँग मिलेर सारगढीको युद्ध माथि फिल्म बनाउने वाला छन् । फिल्मको नाम ‘केसरी’ हुनेछ । यो भन्दा पहिला अजय देवगन पनि यही विषयमा फिल्म बनाइरहेका छन् । निर्देशक राजकुमार सन्तोषी पनि यही विषयमाथि फिल्म बनाइरहेको बताइएको छ । एकै विषयमा आधारित यी तीन फिल्मले व्यापारमा कसले कसलाई पछार्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ । एजेन्सी